मेरो उमेर १८ वर्ष भयो ? दिनमा १ पटक सेक्स गरिएन भने म पागल हुन्छु – के यो रोग हो या मेरो वैश चढेको हो ? - OneZero News
यौनइच्छा जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। प्राकृतिक रूपमा सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौनइच्छा हुन्छ। यौनइच्छा एकदम स्वाभाविक हो। यो प्राकृतिक शक्ति वा व्यग्रताले निश्चित कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्छ।दिनमा एक पटक यौन सम्पर्क नगरी बस्न नसक्ने १८ बर्षिय युवतीको व्यथा”
यो आधारभूत कुरा भएको हुनाले यसलाई मस्तिष्कको एक भागले सञ्चालन गर्छ। प्राणीहरूको विकासक्रमलाई हेर्न हो भने मस्तिष्कको यो भाग करोडौं वर्ष पहिले नै विकसित भएको देखिन्छ।